War Hada Ah: Labo qarax oo ka dhacay Caasimadda Uganda ee Kampala
HomeWararka CaalamkaWar Hada Ah: Labo qarax oo ka dhacay Caasimadda Uganda ee Kampala
November 16, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Labo qarax oo xooggan ayaa gelinkii hore ee maanta oo Talaado ah ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, waxaana qaraxyadan ay boolisku ku tilmaameen “Weerar” lagu qaaday magaalada.
Labada qarax ayaa ka kala dhacay bartamaha ganacsiga, midna wuxuu ku dhow yahay saldhigga dhexe iyo midka labaad oo ku dhow albaabka baarlamaanka.
Emmanuel Ainebyona oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in ugu yaraan 24 qof la dhigay isbitaallada kuwaas oo ku dhaawacmay qaraxyada. Afar ka mid ah ayaa qaba dhaawacyo halis ah, ayuu yidhi.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay Qaraxa.
“Waxa aan dhihi karno waa weerar laakiin cidda mas’uulka ka ah waa arrin baaritaan lagu hayo,” Kaaliyaha kormeeraha guud ee booliiska Uganda Edward Ochom ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada ayaa la arkayay iyaga oo faarujinaya xayndaabka xarunta baarlamaanka ee u dhow Qaraxa, sida ay sheegtay warbaahinta qaranka ee UBC.